N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ụmụ nwanyị mgbe ha dị 40 na-eyikarị ejiji dị ka ụmụ agbọghọ, nke na-adịghị etinye nkwanye ùgwù n'ebe ha nọ. N'otu oge ahụ, ịgbalị iji ejiji na uwe na-enweghị atụ na-ebute ọdachi. Ngwọta ziri ezi maka ụmụ nwanyị karịrị 40 bụ uwe mara mma.
Kedu ihe uwe ejiji ndị inyom dị mma dị ka afọ 40?
Nke mbụ, ha aghaghị ikpuchi ikpere na ọ dịkarịa ala ruo etiti, ọ dịghịkwa mkpa na ụdị anụ ahụ onye nnabata ahụ bụ. Kpakpando nke Hollywood, na ọgbọ Russia na-ejikarị akwa uwe na ejiji na-asọ oyi, mana ha bụ kpakpando. Na ndụ nkịtị, ọ dịghị onye na-ekwu na ị ga-eyi maxi, ma ogologo dị n'okpuru ikpere bụ iwu nke ezigbo uto.
Nke abuo, na-egekwu anya na agba. Uwe mara mma maka nwanyị nke afọ 40 apụghị ịrụ ọrụ na ndo nke "pistachio iwe" ma ọ bụ acid oroma. Oge eruola inye ohere maka àgwà dị mma ma dị mgbagwoju anya. Kwe ka uwe ejiji gi mejuputa ya na ezigbo coral ma o bu ihe omimi. Ọ nwere ike ịbụ pink, ma na ndò nke "fuchsia" ma ọ bụ "salmon". Ihe atụ kachasị mma nke agba chaa chaa bụ "orchid shining" - otu n'ime ndị ọkacha mmasị nke Panton Color Institute .
Nke atọ, welie ihe ndị a chọrọ maka ihe. Ọ ka mma na ị ga-enwe mmetụta nke onwe gị na akwa ejiji silk ma ọ bụ ákwà, ebe ọ bụ na ihe ahụ. A na-achọta uwe elu mgbede na-adọrọ mmasị maka ụmụ nwanyị karịa 40 pụrụ iche na ụfọdụ ụdị German. Ma ọ bụrụ na ụmụ agbọghọ na-eji ejiji German, ọ ga-abụ na ọ dị mma maka nwanyị nke ọgbọ a.
Uwe ejiji nke umunwanyi di iri abuo
Enweghị ọdịiche dị iche n'àgwà ụdị uwe ndị a. Naanị ihe a pụrụ ịkọwapụta: ụfọdụ n'ime ndị nwere ike iyi ihe na-agwụ ike n'ahụ ụmụ agbọghọ, na ụmụ nwanyị ndị dị afọ 40 malitere igwu egwu n'ụzọ ọhụrụ. Dị ka ihe atụ, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ejiji akwa akwa na akwa neckline na akwa uwe. Nhọrọ a bụ isi, ọ zuru oke maka ịrụ ọrụ, yana, na-agbakwunyere akpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbuke na jaket, ga-eme ka ị bụrụ aha maka nwanyị nwere imetụ ụtọ uto.
Banyere ejiji mara mma maka ụmụ nwanyị mara abụba ruo 40, ha kwesịrị ịṅa ntị n'àgwà abụọ - n'elu ihe ọkụrị, nke a na-enwupụ ọkụ na-ekpuchi ezughị okè nke ọnụ ọgụgụ ya, ebe ọ na-eme ka onyinyo ahụ bụrụkwuo nwanyị ma maa mma.
Coral agba na uwe
Akwa Ịtali maka Ụmụ nwanyị
Uwe akwa oyi si Evelina Khromchenko
Ọnọdụ maka oge ịse foto maka zuru ezu
Top 5 kasị njọ horror hairstyles
Kedu ihe ị ga-eji na-eme ballet na coral?
Ọnụ ọgụgụ nke onye mmadụ
Ejiji ejiji maka ọnụ ọgụgụ "ube"
Kedu otu esi eji akwa akwa?
Kedu ihe ị ga-eji akpụ akpụ ụkwụ?
Kedu agba e jikọtara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
Gịnị bụ aha Devid
Guzo maka cauldron
A na-eri osikapa
Nri na abụba maka ọnwụ
"Mkpịsị aka" nke anụ ezi
Ndị na-anaghị eri ahụ
Esi ewepu ntutu isi?
Ụbọchị Ọhụụ Ụbọchị Ọhụrụ
Uwe mgbede ezumike
Antonovka - ọma na ihe ọjọọ
"Akwụkwọ" ihe efu, ma ọ bụ dịka nne na nwa na-eme uwe nke nrọ ya
Onye na-eme ihe nkiri David Hasselhoff gbanwere aha ahụ